Weerar ismiidaamin ah oo Khasaare weyn geystay oo ka dhacay Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Weerar ismiidaamin ah oo Khasaare weyn geystay oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Weerar ismiidaamin ahaa ayaa Arbacadii maanta waxa uu ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose Xamar, iyadoo qaraxaasi laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah Magaalada Muqdisho.
Nin naftii hallige ahaa ayaa la soo sheegaya in uu isku qarxiyay Xarunta Dowladda Hoose Xamar, wax yar uun ka dib, markii uu goobta ka tagey Wakiilka Qaramada Midoobe u qaabilsan arrimaha Somaliya, James Swan.
Wakiilka oo duhurnimadii maanta Dowladda Hoose gaaray ayaa kula kulmay masuuliyiin uu ugu sareeyay Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow).
Wararka ayaa sheegaya in iminka rasaas laga maqlayo Xarunta Dowladda Hoose. Ma cadda in dabley hubeysan ay gudaha u gashay Xaruntaasi iyo in kale.
Qaraxan ayaa waxaa lagu soo beegay, xilli halkaasi uu kulan uga socday Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah Gudoomiye-yaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in dhaawac fudud soo gaaray Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, iyadoo sidoo kalena ay jiraan warar sheegaya in Gudoomiye-yaasha Degmooyinka ay qaarkood dhaawacyo qabaan.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ku dhintay Gudoomiyaha Degmada Waaberi.
Qaraxan waxa uu ku so aadayaa maalin ka dib, markii ismiidaamin kale ay ka dhacday wadada xiriirisa Garoonka Aadan Cadde iyo Isgoyska KM4, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 17 ruux, oo rayid u badnaa.